Indawo yokuhlala kunye neempawu zentlanzi yoonomadudwane | Ngeentlanzi
Iintlanzi zenza iqela lezinto ezahlukeneyo esinokuzijonga kwindalo. Zifumaneka kuwo wonke umhlaba, zihlala ezilwandle, emilanjeni, kumachibi nakwizinto ezahlukeneyo eziphila emanzini. Iimpawu ezahlukeneyo kunye neminyaka yokuvela kwezinto ekhokelele kuluhlu olubanzi lweentlobo, nganye nganye ikhethekile. Ngesi sihlandlo, siza kukuxelela ngohlobo olungaqhelekanga, nangona lwaziwa njengeentlanzi Iintlanzi ze-Scorpion.
Kule nqaku unethuba lokufunda okungakumbi malunga nesi silwanyana simangalisayo, esiye, phakathi kwezinye izinto ezininzi, sivelele ubungozi baso, esingasinikanga igama elihle kakhulu.
2 Iimpawu zentlanzi yoonomadudwane
Ewe i-scorpion fish yintlanzi eye yaqhelana kakuhle neentlobo ezahlukeneyo zokuhlala emanzini. Kulula ukuzifumana kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, kuba ayiyiyo intlanzi ethile evela kwindawo ethile okanye kwindawo ethile. Ewe kufuneka uphawule ukuba abona bantu baninzi bahlala kunxweme lwase-Australia, eFiji, kuLwandlekazi lwaseIndiya nakuLwandle oluBomvu noLubomvu.
Ngokubanzi, ihlala inesimo esithile samanzi anzulu (ngaphezulu kweemitha ezili-150), ezinje ngolwandle okanye ubunzulu bolwandle. Nangona kunjalo, ayiqhelekanga ukuba ifumaneke kwezinye iintlobo zeendawo ezinje ngamachibi amancinci enziwe kumaza aphantsi.
Iimpawu zentlanzi yoonomadudwane
Igama lenzululwazi yentlanzi ye-scorpion I-Scorpaenidaenjengoko kungokwasekhaya losapho Iscorpaeniformes, ekunokuthiwa yilezo ntlanzi zinamathambo zinikwe izongezo kwimizimba yazo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba intlanzi yomadudwane inesihloko sokuba yenye yeentlobo zeentlanzi ezindala. Enye yeefosili zokuqala zafumana imihla ukusukela kwixesha lika I-Paleocene, ejikelezwe kwiNqanaba ePhakamileyo.
Ayisosidalwa sikhulu. Umzimba wabo, kokubini abangamadoda nabasetyhini, akuqhelekanga ukudlula Iisentimitha ezingama-30 ubude (eziqhelekileyo ziisentimitha ezili-15 ubude). Lo mzimba unemilo emide kwaye icinezelwe, kwaye ixhotyiswe ngemiqolo emininzi eyityhefu. Ezi ntsiba zinetyhefu zininzi entlokweni, kumaphiko omqolo, kumqukumbelo we-quadratic nakumaphiko e-pelvic.
Intloko inkulu kakhulu xa kuthelekiswa nomzimba wonke, kwaye inomlomo omkhulu ocwangciswe ngokungalinganiyo, ngelixa amehlo egcinwe ethe nkqo. Kwakhona, ineentente ezinkulu kulusu lwayo.
I-scorpion fish yenye yezilwanyana ezifumene ezona meko zibalaseleyo zokufihla. Kuxhomekeka kwindawo ehlala kuyo, olu hlobo lwentlanzi lubonakalisa umbala othile okanye olunye esikhumbeni nasezikalini. Njengomgaqo oqhelekileyo, imibala ephambili ibikho mthubi, mdaka, luhlaza, nobomvu.
Malunga nokuziphatha kwabo, bonisa oko bazintlanzi ezinesimo esomeleleyo kakhulu. Amadoda ayindawo kwaye ayingozi. Le meko ibangele ukuba babe nendlela yokuhlala nje. Ukuba ufuna ukwazisa iintlanzi zoonomadudwane kwi-aquarium yakho okanye echibini, gcinani engqondweni ukuba akufuneki ukuba ikhatshwe ziintlanzi ezincinci kunezo zabo, kunye neentlanzi ezininzi okanye iintlanzi ezingenamqolo. Ukuba ubonakala ehamba kunye neentlanzi ezinomqolo ezigqithileyo kuye ngobukhulu.
Iintlanzi ze-Scorpion zi izilwanyana ezinkulu. Indlela yakhe yokubamba ngempumelelo ibangelwa yinto esixoxe ngayo ngaphambili, ukukwazi kwakhe ukuzifihla. I-scorpion fish iyazifihla de ixhoba layo livele, nto leyo eyothusayo kwishumi lomzuzwana ngokuyiginya.
Ihlala ibambisa iintlanzi ezincinci, iimollusk ezincinci, ii-crustaceans, njl.
Njengoko besitshilo ekuqaleni kwenqaku, iintlanzi ezinonomadudwane azinalo igama elihle. Ziyintlanzi enetyhefu, abalinganiswa bezona zilumko zixhaphakileyo ezenzeka kumanxweme nakwiindawo eziselunxwemeni.
El ityhefu (ityhefu kunye ne-vasoconstrictor) Esi silwanyana sithwala iziphumo ezinje ngokudumba okuqatha kwenxalenye yomzimba echaphazelwe kukulunywa, ukugabha okungapheliyo, iintlungu ezinkulu kunye neenkqubo zomkhuhlane. Kwiimeko ezinzima kakhulu, isifundo sinokuhlupheka ngenxa yokungakwazi ukuphefumula kunye neengxaki ezinzima kakhulu zokuphefumula.
Ngokwesiqhelo, ukulunywa ziintlanzi ngoonomadudwane kwenzeka ezantsi kweenyawo, kuba njengoko ezi zilwanyana zihlala zingagungqi kumgangatho wolwandle ixesha elide, kulula kakhulu ukuba uzinyathele kwaye utshone esinye sezihlunu zayo.
Ukuba ngelishwa sihlatyiwe yintlanzi yoonomadudwane, amanyathelo ekufuneka elandelwe ukuze owona monakalo mbi ngala: Faka i-ammonia kwindawo yokuluma, igcwaliswe kunye nokusetyenziswa kobushushu ekufuneka kuhlale iyure enesiqingatha. Nangona kunjalo, njengesiqhelo, kungcono ukuya kwiziko lezempilo elikufutshane okanye kugqirha oya kuthi ayiphonononge kakuhle imeko yethu kwaye anike elona yeza lifanelekileyo.
Siyathemba ukuba sikusondezile kwaye sazisa ngobunzulu kule ntlanzi uvile ngayo kwaye abaninzi kuye kwafuneka bajongane nayo ngaphezulu kweentlanganiso zokuzonwabisa ngexesha lokuhlamba kwabo elunxwemeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi ze-Scorpion
Ndiyithanda kakhulu iwebhu kunye nalo lonke ulwazi, kodwa ndicinga ukuba yiloo ntlanzi, ayingonomadudwane.
Uxolo, ngubani igama le venkile yentlanzi yoonomadudwane?
Olu lwazi aluchanekanga, lolwama-Order Scorpaeniformes kunye ne-Family Scorpaenidae, ndiyakumema ukuba uphonononge ulwazi lwakho, kuba ukulawulwa kweentlobo zaselwandle kukho "irejista yehlabathi yeentlobo zaselwandle" (ii-WoRM)